amụma nzuzo - Best amụba Ifriizi Mịrị Food
THRIVE Kpọkọta Usoro Nzuzo
Anyị na-agba mbọ ichebe ndị ọbịa anyị na ịnye ebe nchekwa na ahụike maka onye ọ bụla. Biko nyochaa iwu nzuzo anyị na usoro ojiji nke weebụsaịtị a na ozi dị n'ime ya. Enwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla.
TRR Free Ifriizi (“Anyị”, “Anyị”, ma ọ bụ “nke anyị”) na-arụ ọrụ thrivefreeze.com weebụsaịtị na ngwa mkpanaka (nke a na-akpọ ugbu a dị ka "Ọrụ").
Peeji a na-agwa gị amụma anyị gbasara mkpokọta, jiri na igosipụta nke onwe onye mgbe ị na-eji Ọrụ anyị na nhọrọ ị jikọtara na data ahụ.
Anyị na-eji data gị iji nye ma melite Ọrụ ahụ. Site n'iji Ọrụ ahụ, ị kwenyere na nchịkọta na ojiji nke ozi dịka usoro a si dị. Ọ gwụla ma akọwapụtara ya na Nzuzo Nzuzo a, usoro e ji mee Nzuzo Nzuzo a nwere otu ihe o putara na Usoro na Ọnọdụ anyị.
Ọrụ Ọrụ pụtara thrivefreeze.com weebụsaịtị .
Ozi Nkeonwe Data nkeonwe pụtara data gbasara onye dị ndụ nke enwere ike ịmata site na data ndị ahụ (ma ọ bụ site na ndị ahụ na ozi ndị ọzọ ma anyị nwere ma ọ bụ nwee ike ịbanye na anyị).
Ojiji eji Data ojiji bụ data anakọtara na akpaghị aka ma ọ bụ sitere na iji Ọrụ ahụ ma ọ bụ site na akụrụngwa Ọrụ n'onwe ya (ọmụmaatụ, oge nleta ibe).
Kuki Kuki bụ obere faịlụ echekwara na ngwaọrụ gị (kọmputa ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaaka).
Ihe njikwa data Ihe njikwa data pụtara mmadụ ma ọ bụ onye iwu kwadoro (ma ọ bụ naanị ya ma ọ bụ jikọrọ ya na ndị ọzọ) na-ekpebi ebumnuche maka na etu ozi gbasara onwe ọ bụla dị, ma ọ bụ ga-abụ, Maka nzube nke Iwu Nzuzo a, anyị bụ Data njikwa maka ozi gbasara gị.
Nhazi data (ma ọ bụ Ndị Na-enye Ọrụ) Nhazi data (ma ọ bụ Onye Na-eweta Ọrụ) pụtara mmadụ ma ọ bụ iwu ọ bụla nke na-eme data na nnọchite Data Controller. Anyị nwere ike iji ọrụ nke ndị na-enye ọrụ dị iche iche iji hazie data gị nke ọma..
Isiokwu Data (ma ọ bụ Onye ọrụ) Isiokwu Data bụ onye ọ bụla dị ndụ nke na-eji Ọrụ anyị ma ọ bụ isiokwu nke Ozi Nkeonwe.
Anyị na-anakọta ọtụtụ ozi dị iche iche maka ebumnuche dị iche iche iji nye ma melite Ọrụ anyị nye gị.
Ofdị data anakọtara
Mgbe ị na-eji Ọrụ Anyị, anyị nwere ike ịrịọ gị ka ị nye anyị ụfọdụ ozi eji amata mmadụ nke enwere ike iji kpọtụrụ ma ọ bụ mata gị (“Ozi Nkeonwe”). Ozi nkeonwe nwere ike ịgụnye, mana ọnweghị oke na:
Adreesị, Steeti, Mpaghara, Koodu Mpaghara / Nzipu ozi, Obodo
Kuki na data ojiji
Anyị nwere ike iji Personal Data gị iji kpọtụrụ gị na akwụkwọ akụkọ, ahia ma ọ bụ ihe nkwado na ozi ndị ọzọ nwere ike ịmasị gị. May nwere ike ịpụ na ịnweta ihe ọ bụla, ma obu ihe nile, nke nkwukọrịta a sitere n'aka anyị site na isoro njikọ wepu aha ma ọ bụ ntuziaka enyere na email ọ bụla anyị zitere ma ọ bụ site na ịkpọtụrụ anyị.
Anyị nwekwara ike ịnakọta ozi nke ihe nchọgharị gị na-eziga mgbe ọ bụla ị gara Ọrụ anyị ma ọ bụ mgbe ị banyere Ọrụ ahụ site na ma ọ bụ site na ngwaọrụ mkpanaaka (“Ojiji data”).
Usoro ojiji a nwere ike ịgụnye ozi dịka adreesị Ntanetị kọmputa nke kọmputa gị (ịmaatụ. Adreesị IP), ụdị nchọgharị, ihe nchọgharị, peeji nke Ọrụ anyị nke ị gara, oge na ụbọchị ọbịbịa gị, oge ejiri na ibe ndị ahụ, ihe nchọpụta ngwaọrụ pụrụ iche na data nyocha ndị ọzọ.
Mgbe iji ekwentị mkpanaaka nweta Ọrụ ahụ, data ojiji a nwere ike ịgụnye ozi dịka ụdị ngwaọrụ mkpanaka ị na-eji, ekwentị mkpanaaka gị ID pụrụ iche, Adreesị IP nke ekwentị gị, sistemụ mkpanaka gị, ụdị ihe nchọgharị mobilentanetị mkpanaka ị na-eji, ihe nchọpụta ngwaọrụ pụrụ iche na data nyocha ndị ọzọ.
Anyị nwere ike iji ma chekwaa ozi gbasara ọnọdụ gị ma ọ bụrụ na ị nye anyị ikike ime ya (“Ọnọdụ data”). Anyị na-eji data a iji nye atụmatụ nke Ọrụ anyị, iji melite ma hazie Ọrụ anyị.
Nwere ike ịkwalite ma ọ bụ gbanyụọ ọrụ ọnọdụ mgbe ị na-eji Ọrụ anyị n'oge ọ bụla site na ntọala ntọala ngwaọrụ gị.
Ndepụta & Data Kuki
Anyị na-eji kuki na teknụzụ nsuso ndị yiri ya soro ọrụ na Ọrụ anyị ma anyị ejiri ụfọdụ ozi.
Kuki bụ faịlụ nwere obere data nke nwere ike ịgụnye ihe nchọpụta pụrụ iche na-enweghị aha. A na-eziga kuki na ihe nchọgharị gị na weebụsaịtị wee chekwaa na ngwaọrụ gị. A na-ejikwa teknụzụ nsuso ndị ọzọ dịka mgbama, mkpado na edemede iji kpokọta ma soro ozi ma melite ma nyochaa Ọrụ anyị.
Iji chọpụta, gbochie ma lebara ọrụ anya anya
Iji nye gị ozi, onyinye pụrụ iche na ozi izugbe banyere ngwongwo ndị ọzọ, ọrụ na mmemme anyị na-enye ndị yiri nke ịzụrụla ma ọ bụ jụọ ajụjụ belụsọ ma ị họrọghị ịnata ozi dị otú ahụ
Iwu Iwu maka ịhazi data nkeonwe n'okpuru Iwu Nchekwa Data General (GDPR)
Ọ bụrụ na ị si na European Economic Area (EEA), THRIVE Kpochapụ ihe ndabere iwu maka ịnakọta na iji ozi nkeonwe akọwapụtara na Nzuzo Nzuzo a dabere na Data Nkeonwe anyị na-anakọta na otu anyị si enweta ya..
THRIVE Freeze nwere ike ịhazi data nkeonwe gị n'ihi:
Anyị kwesịrị ịmekọrịta nkwekọrịta gị na gị
I nyela anyị ikike ime otú ahụ
Nhazi ahụ bụ maka ọdịmma anyị dabara adaba yana ikike gị anaghị achịkwa ya
Maka ebumnuche nhazi ịkwụ ụgwọ
Iji rube isi n'iwu
THRIVE Freeze ga-ejigide data nkeonwe gị naanị ogologo oge ọ dị mkpa maka ebumnuche akọwapụtara na amụma nzuzo a. Anyị ga-ejigide ma jiri data nkeonwe gị ruo oke mkpa iji rube isi na iwu anyị (ọmụmaatụ, ọ bụrụ na achọrọ ka anyị jigide data gị iji soro iwu dị), dozie esemokwu ma kwado nkwekọrịta na usoro iwu anyị.
THRIVE Freeze ga-ejigide data ojiji maka ebumnuche nyocha nke ime. A na-ejikarị data ojiji maka obere oge, ewezuga mgbe ejiri data a iji mee ka nchedo ahụ sie ike ma ọ bụ melite arụmọrụ nke Ọrụ anyị, or we are legally obligated to retain this data for longer periods.
Under certain circumstances, THRIVE Freeze may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (ịmaatụ. a court or a government agency).
Iji kpuchido ma chebe ikike ma ọ bụ ihe onwunwe nke THRIVE Freeze
Iji gbochie ma ọ bụ nyochaa omume adịghị mma metụtara Ọrụ ahụ
Iji kpuchido nchedo nke ndị ọrụ nke Ọrụ ma ọ bụ ọhaneze
Iji kpuchido iwu iwu
Nche nke data
Nche nke data gị dị anyị mkpa ma cheta na ọ dịghị usoro ịnyefe na orntanetị ma ọ bụ usoro nchekwa kọmputa 100% nọrọ ná nchebe. Ọ bụ ezie na anyị na-agba mbọ iji azụmaahịa a nabatara iji chebe data nkeonwe gị, anyị enweghị ike ịkwado ya nchekwa zuru oke.
Amụma anyị na "Esona '' akara ngosi n'okpuru Iwu Nchedo N'ịntanetị nke California (CalOPPA)
Anyị anaghị akwado Esochiela (“DNT”). Do Not Track is a preference you can set in your web browser to inform websites that you do not want to be tracked.
The right to access, update or delete the information we have on you. Mgbe ọ bụla enwere ike, ị nwere ike ịnweta, melite ma ọ bụ rịọ nhichapụ nke Personal Data gị n'ime ngalaba ntọala akaụntụ gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịme ihe ndị a n'onwe gị, biko kpọtụrụ anyị iji nyere gị aka.
Ikike nke ndozi. I nwere ikike ime ka ozi gị dozie ma ọ bụrụ na ozi ahụ ezighi ezi ma ọ bụ ezughi oke.
Ikike ịjụ. I nwere ikike ịjụ nhazi anyị nke Personal Data gị.
Ikike igbochi. I nwere ikike ịrịọ ka anyị gbochie nhazi nke ozi nkeonwe gị.
Ikike enwere ike iwepụ data. Nwere ikike ka e nye gị otu nnomi ozi anyị nwere n’ebe ị nọ ahazi, igwe na-agụkarị usoro a na-ejikarị.
Ikike ịhapụ nkwenye. Also nwekwara ikike ịdọrọ nkwenye gị n'oge ọ bụla ebe THRIVE Freeze dabere na nkwenye gị ịhazi ozi nkeonwe gị.
Biko rịba ama na anyị nwere ike ịrịọ gị ka inyocha njirimara gị tupu ị zaa ụdị arịrịọ ndị a.
I nwere ikike ime mkpesa na Onye Ọchịchị Nchedo Data gbasara mkpokọta na ojiji nke data nkeonwe gị. Maka ozi ndị ọzọ, biko kpọtụrụ ikike nchebe data mpaghara gị na European Economic Area (EEA).
Anyị nwere ike were ụlọ ọrụ ndị ọzọ na ndị mmadụ n'otu n'otu iji kwado Ọrụ anyị (“Ndị Na-enye Ọrụ”), nye Ọrụ ahụ maka anyị, rụọ ọrụ ndị metụtara Ọrụ ma ọ bụ nyere anyị aka nyochaa etu esi eji Ọrụ anyị.
Ndị ọzọ a nwere ohere ịnweta Personal Data gị naanị iji rụọ ọrụ ndị a na nnọchite anyị ma bụrụkwa ndị ekwesighi igosipụta ma ọ bụ jiri ya maka ebumnuche ọzọ..
Anyị nwere ike iji ndị na-eweta ọrụ ndị ọzọ iji nyochaa ma nyochaa ojiji nke Ọrụ anyị.
Nchịkọta Google Nchịkọta Google bụ ọrụ nchịkọta weebụ nke Google nyere nke na-agbaso ma na-akọkwa okporo ụzọ weebụsaịtị. Google jiri data anakọtara iji nyochaa ma jiri ojiji nke Ọrụ anyị. A na-ekerịta data a na ọrụ Google ndị ọzọ. Google nwere ike iji data anakọtara iji kọwaa ma hazie mgbasa ozi nke netwọkụ mgbasa ozi nke ya. Maka ozi nzuzo nke Google, biko gaa na Nzuzo Google & Okwu ibe weebụ: https://policies.google.com/privacy?hl=en
THRIVE Freeze na-eji ọrụ nrụzigharị iji kpọsaa na weebụsaịtị nke ndị ọzọ mgbe ị gachara Ọrụ anyị. Anyị na ndị na-ere ahịa anyị nke atọ na-eji kuki iji zie ozi, ebuli ma nye mgbasa ozi dabere na nleta gị gara aga na Ọrụ anyị.
Mgbasa ozi Google (AdWords) Mgbasa ozi Google (AdWords) Google Inc na-enye ọrụ ntugharị ọrụ ị nwere ike ịpụ na nchịkọta Google Analytics maka Mgbasa Ozi Ngosiputa ma hazie mgbasa ozi Network Ngosipụta Google site na ịga na ibe Ntọala Mgbasa Ozi Google: http://www.google.com/settings/adsGoogle na-atụ aro ịwụnye mgbakwunye Nchọgharị Nchọpụta Google - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - maka ihe nchọgharị weebụ gị. Nchịkọta Nchọgharị Nchọpụta Google Analytics na-enye ndị ọbịa ikike iji gbochie data ha site na ịnakọta ma jiri Google Analytics mee ihe. Maka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo nke Google, biko gaa na Nzuzo Google & Okwu ibe weebụ: https://policies.google.com/privacy?hl=en
Ntughari Mgbasa ozi Bing Microsoft Inc. na-enye ntughari ọrụ Mgbasa ozi Bing ou nwere ike wepu aha na Mgbasa ozi Bing nke dabere na mmasi site na isoro ntuziaka ha.: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-adsCan nwere ike ịmụtakwu banyere omume nzuzo na iwu nke Microsoft site na ịga na ibe Iwu Nzuzo ha: https://privacy.microsoft.com/en-us/PrivacyStatement
Twitter A na-enye ọrụ ntụgharị Twitter site na Twitter Inc. Inc. nwere ike ịpụ na mgbasa ozi ndị nwere mmasị na Twitter site na isoro ntuziaka ha: https://support.twitter.com/articles/20170405Nwere ike ịmụtakwu banyere omume nzuzo na atumatu nke Twitter site na ịga na peeji nke amụma nzuzo ha: https://twitter.com/privacy
Facebook Facebook Inc na-enye ọrụ ntughari Facebook ọzọ Y nwere ike ịmụtakwu banyere mgbasa ozi sitere na mmasị site na Facebook site na ịga na ibe a: https://www.facebook.com/help/164968693837950Iji pụọ na mgbasa ozi mgbasa ozi nwere mmasị nke Facebook, soro ntuziaka ndị a site na Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217Facebook adheres to the Self-Regulatory Principles for Online Behavioural Advertising established by the Digital Advertising Alliance. You can also opt-out from Facebook and other participating companies through the Digital Advertising Alliance in the USA http://www.aboutads.info/choices/, the Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ or the European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/, or opt-out using your mobile device settings.For more information on the privacy practices of Facebook, please visit Facebook’s Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Pinterest Pinterest remarketing service is provided by Pinterest Inc.You can opt-out from Pinterest’s interest-based ads by enabling the “Do Not Track” functionality of your web browser or by following Pinterest instructions: http://help.pinterest.com/en/articles/personalization-and-dataCan nwere ike ịmụtakwu banyere omume nzuzo na atumatu nke Pinterest site na ịga na peeji nke amụma nzuzo ha: https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
Obu onye Adromolle na-enye ọrụ ntughari site na Semantic Sugar, Inc Y nwere ike ịpụ na ịregharị ahịa AdRoll site na ịga na ibe weebụ AdRoll Mgbasa Ozi Mmasị: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1&nt=1&nw=falseMaka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo nke AdRoll, biko gaa na AdRoll amụma nzuzo ibe weebụ: http://www.adroll.com/about/privacy
AppNexus AppNexus na-enye ọrụ ntugharị AppNexus bụ AppNexus Inc. na-enye gị & ibe AppNexus Platform web page: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy#choicesMaka ozi ndị ọzọ gbasara omume nzuzo nke AppNexus, biko gaa na AppNexus Platform amụma nzuzo web page: https://www.appnexus.com/platform-privacy-policy
Ọrụ anyị nwere ike ịnwe njikọ na saịtị ndị ọzọ nke anyị anaghị arụ ọrụ. Ọ bụrụ na ị pịa njikọ ndị ọzọ, a ga-eduzi gị na saịtị nke atọ ahụ. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị nyochaa amụma nzuzo nke saịtị ọ bụla ị gara.
Anyị enweghị ikike ịchịkwa ma buru ibu ọrụ ọ bụla maka ọdịnaya, iwu nzuzo ma ọ bụ omume nke saịtị ma ọ bụ ọrụ ọ bụla nke atọ.
Ọrụ anyị anaghị agwa onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ 18 (“Childrenmụaka”).
Anyị anaghị akpachara anya anakọta ozi nkeonwe sitere n'aka onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ 18. Ọ bụrụ na ị bụ nne ma ọ bụ nna ma ọ bụ onye nlekọta ma ị maara na Nwa gị nyere anyị Data nkeonwe, please contact us. Ọ bụrụ na anyị amata na anyị anakọtara Data nkeonwe n'aka ụmụaka na-enweghị nkwenye nke nkwenye ndị nne na nna, anyị na-eme ihe iji wepu ozi ahụ na sava anyị.
Anyị nwere ike imelite Amụma Nzuzo anyị site n’oge ruo n’oge. Anyị ga-agwa gị maka mgbanwe ọ bụla site na ịdebe Iwu Nzuzo ọhụrụ na ibe a.
Anyị ga-eme ka ịmara site na email na / ma ọ bụ ọkwa mara ọkwa na Ọrụ anyị, tupu mgbanwe ahụ adị irè ma melite "ụbọchị dị irè" n'elu nke Nzuzo Nzuzo a.
A dụrụ gị ọdụ inyocha Iwu Nzuzo a kwa oge maka mgbanwe ọ bụla. Mgbanwe na Nzuzo Nzuzo a dị irè mgbe edere ha na ibe a.